सडकमा फोहर फाल्ने पुरानो मानसिकता अझै हटेन करोडौंको घर बनाउन सक्छौं तर विडम्बना फोहर फाल्ने डस्विन बनाएर राख्न सक्दैनौंं - Gokarna News from Nepal
सोमबार, असोज १३, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौंमा फोहरको समस्या अहिलेको मात्र होईन । यो समस्या बर्षै देखीनै समस्याका रुपमा आएको छ । फोहोर ब्यवस्थापनको समस्या ०५२ ०५३ सालदेखी देखिएको समस्या अहिलेपनि उस्तै छ । सिसडोलमा फोहोर फ्याक्न नदिने लगायतका समस्याहरु काठमाडौबासीले बिगतदेखि नै भोग्दै आएका छन् । भन्नलाई सहज छ । फोहरमा मोहर फलाउने तर त्यसमा आउने समस्या के कति छन् कसता समस्या भोग्नुपर्छ त्यो त्यही व्यवसायमा हातराखेका व्यत्तिलाई मात्र थाहा हुन्छ । विगत लामो समयदेखी काठमाडौंमा देखिएको फोहरलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा क्रियाशिल रहेका छन् । व्यवसायी बौद्ध सरसफाई केन्द्रका सदस्य तथा एक्टिभ नेपाल क्लीन सर्भिसका सञ्चालक ओमराज लामा । सिन्धुपाल्चोकमा पिता रामसिहँ लामा र माता सुनमाया लामाको जेठो सुपुत्रका रुपमा जन्मीएका ओमराज सानो उमेरमै काठमाडौं छिरे । करिव ४२ साल तिर आमा बाबुसँग काठमाडौं छिरेका ओमराजले कक्षा १२ सम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
आफ्ना नातागोता तथा ईस्टमित्र बौद्ध क्षेत्रमै भएको कारण बालापनदेखि नै बौद्धमा उनको बसोबास रह्यो । उनले बौद्ध क्षेत्रमा यो सरसफाई व्यवसायमा काम गरेको झण्डै २०–२२ बर्ष भईसक्यो । सामाजिक सेवामा रुचि भएका लामा तात्कालिन समयमा बौद्ध क्षेत्रको समस्यालाई नियाल्ने क्रममा बौद्ध क्षेत्रमा फोहोरको समस्या भएको देखे । २०५२÷०५३ सालदेखि नै बौद्ध क्षेत्रका मानिसहरु सडकमै फोहोर फ्याल्ने परिपाटीले उनलाई पिरोल्यो र एउटा संकल्प गरे । अब यस क्षेत्रलाई सरसफाई गर्ने बौद्ध क्षेत्रमा फोहोरको समस्या निकै जटिल अवस्थामा पुगेको देखेपछि फोहोरलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान तथा बुद्धिजिवीहरुसँग परामर्श लिन थाले ।
बौद्ध क्षेत्रको फोहोर ब्यवस्थापनकै लागि उनीहरुले बौद्ध युवा समुह नामक संस्थाको गठन गरे । यसक्रममा बौद्ध क्षेत्रकै लामो समयदेखी समाज सेवा गर्दै आएका धनराज लामा लगाएतका व्यक्तिहरुको परामर्शपछि उनी सडकमा भएको फोहोरलाई खाली ठाँउमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा जुटे । तर त्यतो ठाँउमा पनि फोहर व्यवस्थापन गर्न समस्या देखेपछि । उनको भेट एकजना फोहोर ब्यवस्थापन गर्न व्यक्ति सँग भयो । उनैले लामालाई फोहर व्यवस्थापन गर्दा कसरी कुन सामाग्री पुन ः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ , कसरी रिसाईकल गर्ने भन्ने बारे तिनै व्यक्तिबाट जानकार लिए । ओमराजले त्यही व्यक्तिलाई तलवमा राखेर काम गराउने कार्यमा लागे । कामको सिलसिलामा अनेकौ समस्या आउथे ति समस्यालाई समाधान गर्दै चुनौती र अवरोधको सामना गर्दै अगाडी बढे । बौद्ध सरसफाई केन्द्रपछि २०६२ सालमा एक्टिभ नेपाल क्लीन सर्भिसको सञ्चालन गरे । अहिले सोही कम्पनी मार्फत विभिन्न क्षेत्रहरुमा फोहर उठाउने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
उनले संचालन गरेको एक्टिभ नेपाल क्लीन सर्भिसमा अहिले ३ वटा गाडी संचालित छन् भने बौद्ध नेपाल सरसफाईसहित गर्दा करिव ९ गाडी संचालनमा आएका छन् । उनको स्वामित्वमा रहेको एक्टिभ नेपालले मात्र करिव २० जना कामदारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । लामाको कम्पनीले कामनपा ६ वडा भित्रको फोहर उठाउने जिम्मा पाएका छन् । त्यसमा एक्टिभको कार्यक्षेत्र भनेको बौद्ध पिपलबोट देखि केएलटावरसम्मको क्षेत्र हो । उनका ग्राहक घरधुरीका हिसाबले हेर्दा करिव २२ सय देखी २५ सय सम्म छन् । उनले एक ग्राहक बराबर २ सय देखी फोहरको प्रकृतीहरेर ५ सम्म लिन्छन । अन्य फोहर बढि ठाउँहरुमा भने फोहरको परिमाण हेरर लिने गर्छन । ओमराजले यस व्यवसायमा विभन्न समस्याहरु पनि भएको बताउँछन । भन्छन् ‘यस व्यवसायमा जहाँ पनि समस्यै समस्याहरु छन् । कामदारको समस्या छ, नेपालमा १२–१४ घण्टा काम गर्ने ब्यक्तिहरु निकै कम मात्र छन् ।
कामदारको पाउने देखी काममा टिक्ने नसक्ने समस्या छ । ग्राहकहरुको त्यस्तै समस्या छ । बिहान ६ बजे फोहोर उठायो १०-११ बजेपछि फोहोर ल्याएर फालेका हुन्छन । तेती मात्र होइन एउटा समयमा फोहर ल्याउन गयो । त्यो समयमा ल्याउदैंनन् पछि यति दिनदेखी किन फोहर आएन भन्दै फोनमा कराउँछन , फोहर ल्याउन जाँदा सिटि बजायो । टपमा बस्नेले सुन्दैनन् । रुममा ठुलो भोलुम लगाएर बस्छन । सिटी फुकेको कसरी सुन्ने ? कहिले काही फोहर घर भित्रबाट ल्याईदियो । कोही अन्यले सामान चोरेको रहेछन भनेपनि फोहरवाला आएको थियो । उसैले लग्यो भन्छन् यस्ता कुरा कति सुन्यौ त्यसैले घर भित्र गएर फोहर ल्याउने काम बन्द गरेका छौं । त्यस्तै आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा पनि वार्गेनिङ गर्छन । कोहीले पैसा तिरेका छौं । जतिवेला फाल्दा पनि हुन्छ जसो गरेर फोहर फाल्छन् । यस क्षेत्रमा ल्यान्डफिल्डको पनि समस्या उत्तिकै छ । सिसडोलमा लाने क्रममा असारको समयमा कतै पानी परेको हुन्छ त कतै घाम लागेको । यता घाम लाग्दा उता पानि परिरहेको हुदो रहेछ । त्यस्तोसमयमा गाडी लैजान ल्याउन अत्यान्तै समस्या हुन्छ । गाडी बिग्रीयो बनाउनु प¥यो । इन्धन राख्नै प¥यो यस्ता अनेक समस्या छन् ।
अझ केही ग्राहक त शनिबार मात्र आए हुन्थ्यो भन्नु हुन्छ । उहाँहरु जस्तो अन्य व्यक्तिको फोहर फाल्न नपर्ने जस्तो सोचाईले भन्नुहुन्छ । दुःखको कुरा त के लाग्छ भने करोडौको घर बनाउदा पनि फोहोर राख्ने ठाँउ(डीवीन राख्ने) ठाँउ हुँदैन , बनाउन सक्नुहुन्न हाम्रा काठमाडौं वासी । त्यसैले मुख्य समस्या यो हो छ की हामीले हाम्रो र हाम्रो ग्राहको समयतालिका मिलाउन सकिरहेका छैनौं । बिभिन्न समस्याका कारण ग्राहकले भनेको समयमा हामीले पनि सर्भिस दिन सकिरहेका हुँदैनौं । समस्या कहाँ छ ? कसरी फोहर आएन ? त्यो ग्राहकले बुझ्दीनुपर्छ । अर्को समस्याको रुपमा रहेको अस्पतालबाट निस्कने फोहर जस्तै केमीकल, सिरिन्जले कामदारलाई काट्ने र सिरिन्जबाट लाग्ने रोगहरुबाट समेत रोगको सिकार बन्नु पर्ने स्थीती छ ।केही अस्पतालमा यस्ता बस्तु डिस्पोज गर्ने मेसिन पनि छैन । जसरी ति सामाग्री प्रयोग गर्नेले फोहर त हो जुन फोहरमा फ्यालेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता र केयरलेस ले समस्या निम्त्याउने गर्छन । त्यस्तै यस क्षेत्रमा आउने श्रमिकका नागरिकता नहुने, केही आएपनि मानसिक रुपमा कमजोर भएका आउने । एक दुई दिन काम गर्ने अनि हिड्ने यस्ता यावत समस्या छन् ।
ओमराजको स्थानिय सरकारसँग पनि गुनासा छन् स्थानिय सरकारका प्रतिनिधिहरुले समस्यामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिन्छन तर समस्या पर्दा सहयोग भने पाएका छैनन । भन्छन् ‘उहाँँहरुको पनि बिभिन्न प्रकारका समस्या, प्रक्रियाहरु होलान तर हामीले जति सहयोग पाउनु पथ्र्यो त्यो पाएका छैनौं । नगरपालिकाले ठाँउ–ठाँउमा फोहोर राख्नको लागि डम्पिङ स्टेशनको निर्माण गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । हामीसँग स्टेशन त छ तर त्यो त्यती प्रभावकारी रुपमा छैन् । नगरपालिकाले केही मात्रामा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएर डम्पीङ स्टेशन बनाई काम गर्नेलाई जिम्मा दिए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।हामी खुःसी समेत हुन्थ्यौ । अर्को कुरा अहिले हामी घाटामा गईरहेको अवस्था छ । यदि हामी कवाडी आफै सङ्कलन गर्न सक्यौ भने हामीलाई पनि फाईदा हुन्थ्यो , त्यसलाई पुन ः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्थ्यो । त्यसले हामीलाई मात्र होईन नगरपालिका र वडालाई समेत फाईदा हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
यस व्यवसायका लाग्ने व्यवसायलाई उनको सुझाव छ । काम कुनैपनि ठुलोसानो नभनी निरन्तर रुपमा काम गरे फोहरमा मोहर छ । तर त्यसको लागी निरन्तरत संघर्ष गर्दै अनुभव बटुदै अगाडी बढे फोहरमा पनि मोहर छ । अबको दिनमा नयाँ नयाँ प्रविधिसँग जोडिदै यस क्षेत्रमा लाग्न अनुरोघ गर्छन । ओमराज भन्छन काम गर्न सबै क्षेत्र गाह्रो नै हुन्छ । यसमाथि यो क्षेत्रमा काम गर्न सबैभन्दा गाह्रो काम हो । तपाँईहरुले देखेको र फोहोरमा मोहोर भनेजस्तो पनि सजिलो छैन् । अरु काम गर्न जति सजिलो छ, यो फोहोरमैलाको काम गर्न त्यती गाह्रो छ । कामगर्ने श्रमिकहरु पाउन गाह्रो छ । ल्याण्डफिल्ड स्टेशन पाउन गाह्रो छ । गाडी बिग्रदा बनाउन समस्या छ र गाडी राख्दा समेत गन्हाउने जस्ता समस्या भएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्र सबैले अवहेलना गर्ने क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । फोहोरमा काम गर्ने भन्दैमा सबै फोहोरी नै हुन्छ भन्ने सोच जनमानसमा छ । त्यसैले सबैजनाले सोचमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फोहोर उठाउदैमा कोही फोहोरी हुन्छ भन्ने कुरालाई त्याग्न जरुरी छ । यस क्षेत्रमा लाग्ने मनशायमा हुनुहुन्छ भने पहिलो त कडा मेअनत परिश्रम गर्ने, फोहरमा काम गर्ने। सोच बनाउनुहोस् । त्यो सँगै यस क्षेत्रका अनुभवको पनि उत्तीकै खाँचो छ । पुरानाहरुसँग सल्लाह,सुझाव लिदै काममा लाग्नुस ।